Jereo ny fizarana voalohany an'ny 'Chucky' Eto, Amin'izao - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Jereo ny fizarana voalohany an'ny 'Chucky' Eto, Amin'izao fotoana izao
Jereo ny fizarana voalohany an'ny 'Chucky' Eto, Amin'izao fotoana izao
Ity ny fizarana voalohany ao amin'ny Entirety
by Trey Hilburn III Oktobra 13, 2021 7,857 hevitra
Ny fizarana voalohany an'ny Syfy's Chucky azo maimaim-poana eto. Raha mbola tsy afaka nijery ianao dia izao no fotoana mety indrindra hahatratrarana sy hahitanao izay tian'ny olon-drehetra.
Ny synopsis ho an'ny Chucky mandeha toy izao:
Ao amin'ny andiany fahitalavitra vaovao, nanjary korontana ny tanàna amerikanina iray tsara tarehy taorian'ny fivarotana saribakoly 'Good Guy' taloha tamin'ny fivarotana teo an-tokontany. Vetivety dia tsy maintsy miady amina andiana vono olona mahatsiravina ny tsirairay izay manomboka manala sarona ireo fihatsarambelatsihy lalina ao an-tanàna sy tsiambaratelo miafina. Mandritra izany fotoana izany, namana sy fahavalon'ny lasa an'i Chucky mikisaka niverina tany amin'ny tontolony ary nandrahona ny hampiharihary ny marina ao ambadiky ny fiaviany miafina ho toy ny zaza toa olon-tsotra izay nanjary an'io monster malaza io.
Ny fizarana voalohany dia manomboka amin'ny fanombohana lehibe. Vita be ao anatin'ny fotoana fohy handehanana izany Chucky ary ny ra sy ny tazo. Toa izany Chucky vao mainka tezitra noho ny taona. Izy io koa dia manana endrika tsy ampoizina ho an'i Devon Sawa izay milalao anadahy kambana amin'ity andiany ity.
Afaka nijery ny fizarana voalohany an'ny Chucky mbola? Ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny pejinay Facebook sy Twitter. Maninona no miandry hijery jery ambany!